Mobile Phones တွေ အရမ်းပူလာရင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ? • TECH CORNER
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ…ကျွန်တော်တို့ Page ရဲ့ အပတ်စဉ် စနေ၊ တနင်္ဂနွေ နေ့တိုင်း တင်ဆက်ပေးသွားမဲ့ Tech Knowledge ကဏ္ဍ ကနေကြိုဆိုပါတယ်။ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ကိုယ့်ရဲ့ Mobile Phone လေး heat တွေတက်ပြီး အရမ်းပူလာရင် ဘာကြောင့်ပူလာတာလဲ? ပြီးတော့ အရမ်းမပူအောင် ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းသင့်သလဲ? စတဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ smartphone တစ်လုံးပူလာတာဟာ Processor အရမ်းအလုပ်လုပ်ရတာကြောင့် နဲ့ Battery မှာ ပြသနာရှိနေပြီလို့ ယူဆလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခြား အခြေအနေတွေလဲ ရှိပါသေးတယ်။ ဥပမာ ကားထဲမှာ အချိန်အကြာကြီးထားခဲ့တာ၊ နေရောင်တိုက်ရိုက်ကျတဲ့နေရာတွေမှာ ဖုန်းကို ထားခဲ့တာ၊ ပြီးတော့ အခုလို အပူချိန်မြင့်တက်လာတဲ့ နွေရာသီရောက်လာတာတွေကြောင့်လဲ ပါဝင်ပါတယ်။ ဖုန်းနဲ့ online videos တွေ streaming လုပ်တာ ၊ Games တွေ အကြာကြီးဆော့တာ ၊ GPS ဖွင့်ပြီး Turn by Turn Navigation လုပ်တာ စတာတွေကလဲ ဖုန်းကို heat တက်စေပါတယ်။ ပြီးတော့ တစ်ခါတစ်လေမှာ Quality မကောင်းတဲ့ အားသွင်းကြိုးတွေနဲ့ အားသွင်းတာမျိုးတွေ၊ အားသွင်းရင်း Game ဆော့တာမျိုးတွေ၊ ကိုယ့်ဖုန်းကို Malware တွေ တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေမှာလဲ heat တက်နိုင်ပါတယ်။
ဒါဆို အပူသက်သာသွားအောင် နဲ့ နောက်တစ်ခါ အရမ်းမပူအောင် ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတာ အောက်မှာဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ …
1.ဖုန်းမှာ cover တပ်ထားရင် Cover ကို ချွတ်လိုက်ပါ ပြီးရင် မျက်မှာပြင်ညီတဲ့ ခုံတစ်ခုခုပေါ်မျိုးမှာတင်ပြီး ပန်ကာနဲ့ မှူတ်ပေးပါ။ ရေခဲသေတ္တာထဲကို ထည့်တာမျိုး လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့။
2.ဖုန်းကို power ပိတ်လိုက်ပါ။ အေးသွားလားစောင့်ကြည့်ပါ။ အေးသွားပြီးရင် ဖုန်းကို restart ချ ပြန်တက်လာတဲ့အခါ ဘာ app မှ မသုံးပဲနဲ့ ခဏစောင့်ကြည့်ပါ။ ဘာမှမသုံးပဲနဲ့ Heat တွေ ထပ်တက်လာပြီဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ဖုန်းမှာ hardware ပိုင်းနဲ့ software ပိုင်း တစ်ခုခုမှာ ပြသနာရှိနေပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်တဲ့ service နဲ့ပြကြည့်ပါ။
3.Software ကြောင့် ဖြစ်တာကို ဖြေရှင်းဖို့ software update လုပ်ပါ။ (ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတစ်လေမှာ software update တွေကြောင့်လဲ ပူလာတတ်ပါတယ်။)
4.Malware တွေကြောင့်လဲ ပူလာနိုင်တာမို့ Malware တွေရဲ့ရန်က ကင်းဝေးအောင် Official App store or Google play store က apps တွေပဲ download ပြုလုပ်ပါ။ ကိုယ့်ဖုန်းက security updates တွေပေးရင် အမြဲမြှင့်တင်ပါ။ ကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာ ကိုယ်သုံးနေကျမဟုတ်တဲ့ မရင်းနှီးတဲ့ App တစ်ခုရောက်နေပြီဆိုရင် ချက်ချင်း uninstall လုပ်ပစ်ပါ။ပြီးတော့ source file ရှိလားဆိုတာကိုပါ ရှာဖွေပြီး Delete လုပ်ပါ။
5.အခုလို ပူလွန်းတဲ့ရာသီဥတုမျိုးမှာ အချိန်အကြာကြီး Game ဆော့တာမျိုးတွေ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင် Air Con ရှိတဲ့အခန်းထဲမှာ ဆော့ပါ။ xD ရာသီဥတု ပူပူမှာ Game အရမ်းဆော့တဲ့အခါ မိမိဖုန်းရဲ့ CPU, GPU တွေဟာ အရမ်းအလုပ်လုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကြာလာရင် ဖုန်းရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းသွားနိုင်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် အပူမလွန်ကဲအောင် ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကြမလဲ?
1.နေရောင် တိုက်ရိုက်ကျတဲ့နေရာမှာ ဖုန်းကိုမထားပါနဲ့။
2.ကားထဲမှာ ဖုန်းကိုမေ့ပြီးထားခဲ့တာမျိုး လုံးဝမဖြစ်ပါစေနဲ့။ သင့်ရဲ့ တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ဖုန်း ပျက်စီးတဲ့အထိ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
3.ကိုယ့်ဖုန်းကို cover တပ်သုံးမယ်ဆိုရင် Quality ကောင်းတဲ့ cover ကိုသုံးပါ။ လေထွက်ပေါက်တွေ ပါတဲ့ဖုန်းမျိုးဆိုရင် အဲ့အပေါက်တွေကိုပိတ်နေတဲ့ cover မျိုးကို မသုံးပါနဲ့။ Game ဆော့တဲ့အချိန်မှာ Cover ချွတ်ပြီး ဆော့သင့်ပါတယ် cover တပ်ထားတာထက် အပူပိုသက်သာသလို ကိုယ့်လက်နဲ့ ဖုန်းနဲ့ တိုက်ရိုက်ထိနေတာမို့ အရမ်းပူလာပြီဆိုရင် လက်က အပူကို ချက်ချင်းသိပါတယ်။ အရမ်းကိုပူကျက်နေပြီဆိုရင် game ကို ခဏနားပြီးမှ ပြန်ဆော့တာမျိုးလုပ်ပါ။ cover တပ်ပြီး game ဆော့ရင်ကျတော့ အပူကို ချက်ချင်းမသိနိုင်ပါဘူး သိတဲ့အချိန်ကျတော့လဲ ဖုန်းက အရမ်းပူနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ဖုန်းရဲ့ performance ကို ကျဆင်းစေပါတယ်။
4.ဖုန်းကိုအားသွင်းထားတဲ့အခါမှာ မျက်နှာပြင်ညီတဲ့ surface ပေါ်မှာ အားသွင်းပါ။ အိပ်ယာပေါ်တို့၊ ဆိုဖာပေါ်တို့မှာမသွင်းပါနဲ့။ ဆိုဖာတို့ စောင်တို့ဆိုတာ လျှပ်ကူးကောင်းတဲ့ ပစ္စည်းတွေဖြစ်လို့ သင့်ရဲ့ဖုန်းကို ပိုပူလာစေပါတယ်။
5.Software Update ကို ပုံမှန်လုပ်ပေးပါ။ (software update တွေကြောင့် အပူတက်လာတာမျိုး ရှိပေမဲ့ အဲ့လိုပူလာခဲ့ရင် သင့်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူက အပူပြသနာကို ဖြေရှင်းထားတဲ့ update မျိုးထပ်ပေးတတ်ပါတယ်။)
Xiaomi cooling fan (image credit: xiaomi today)
6.နောက်တစ်ခုက ဖုန်းကို အပူသက်သာစေမဲ့ Accessories မျိုးတွေ၊ ဥပမာ Xiaomi ရဲ့ cooling fan မျိုးလေးတွေ တပ်ပြီး game ဆော့ပါ။ ဈေးက 35000 ဝန်းကျင်လောက်ပဲ ရှိပါတယ်။